Brawl Stars 12.197 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 12.197 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
- A fast-paced multiplayer battle royale is finally here on mobile
ရန်ပွဲဖို့အချိန်! ရေးအဖွဲ့သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတက်နှင့်မော်ကွန်း multiplayer MAYHEM အဘို့အဆင်သင့်ရ! ရန်ပွဲကြယ် Clan ၏တိုက်ပွဲများ၏ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Royale ထိပ်တိုက်တွေ့။
သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း mode သို့ဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအမြန်ပွဲကစား။ '' em တက်, မှုတ် '' shoot em ထ, 'em ထွက်လာကြတယ်နှင့်ရန်ပွဲအနိုင်ရ။
စိတ်လှုပ်ရှား GAME mode မှာ Battle
- ထိပ်တိုက်တွေ့: တစ်ကိုယ်တော် Play ဒါမှမဟုတ် rowdiest စစ်တိုက် Royale အတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ! ပြီးခဲ့သည့် Brawler ရပ်တည်မှုဖြစ်!
- ကျောက်မျက်ရတနာဆုပ်ယူ: အပြိုင်ဘက်အသင်းမှတိုက်ခိုက်နေစဉ်ကျောက်မျက်စုဆောင်းပါ။ 10 ကျောက်မျက်စုဆောင်းအနိုင်ရရှိသူတို့ကိုပေါ်သို့ကျင်းပရန်ပထမဦးစွာအသင်း။
- Bounty: ပြိုင်ဘက်ဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်သင့်အသင်းကြယ်ပွစုဆောင်း, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင်ပယ်ကောက်ပါစေခြင်းငှါမသတိပြုရကြမည်။ အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ပေးရဲ့အဆုံးမှာအများဆုံးကြယ်များနှင့်အတူအဆိုပါအဖွဲ့သည်!
- Heist: အပြိုင်ဘက်အသင်းမှဖြင့်ကာကွယ်ထားလုံခြုံ Crack နှင့်-ပါလိမ့်မယ် safecrackers မှသင်၏အဖိုးတန်ခုခံကာကွယ်။ သင်ကပြန်ပေးလော့အတူအရွက်အဘယ်သူသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်!
- ရန်ပွဲ Ball ကို: ဒါဟာတစ်ခုလုံးအသစ်အ ballgame ပဲ! သင့်ရဲ့အဖွဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးတဲ့မတိုင်မီနှစ်ခုရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်းနိုင်ပါသလား?
BRAWLERS စုဆောင်း upgrade
ပါဝါအချက်များသူတို့နှင့်အတူ upgrade, SUPER စွမ်းရည်ဒဏျခတျနှင့်အတူတစ်ဦးအမျိုးမျိုးဇာတ်ကောင် Unlock နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အရေခွံသူတို့နှင့်အတူ customize ။
SOLO PLAY နှင့်သူငယ်ချင်းများ
အခြားကစားသမားအတူမဟာဗျူဟာနှင့်စစ်တိုက်ဝေမျှဖို့တစ် Band join ။
- တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ multiplayer စစ်တိုက် Royale မိုဘိုင်းပေါ်ကဒီမှာနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပါသည်
- လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကစားသမားဆန့်ကျင်ဗရုတ်, Real-time 3v3 တိုက်ပွဲများ
- တစ်ဦးလက်မှတ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် SUPER စွမ်းရည်နှင့်အတူအသီးအသီး - အသစ်အစွမ်းထက် Brawlers Unlock!
- အကွိမျမြားစှာထူးခြားတဲ့ဂိမ်း Modes သာသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ကစားရန်
- အတူတကွအကြံပေးချက်များနှင့်စစ်တိုက်ဝေမျှဖို့သူချင်းကစားသမားနှင့်အတူ Brawlers တစ် Band ဖွဲ့စည်း
- ကြောင်းဝေဖန်အစွန်းအဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံး Brawlers Upgrade
- သော့ဖွင့်အရေခွံနှင့်သင်၏ Brawlers Customize
Brawl Stars အား အခ်က္ျပပါ
smgamersgames စတိုး 334 89.94k
APK ဗားရွင္း 12.197
Release date: 2018-10-09 17:19:56